2012 February | MoeMaKa Burmese News & Media
DVB အင်တာဗျူး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ဦးအေးချမ်းနိုင်နှင့် ဦးကျော်ဆန်း တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဒီဗွီဘီ)
ဦးခင်ညွန့်ကို ဦးခင်ရွှေ ကျေးဇူးဆပ်ပြီ ခင်ဦးသာ/ဧရာဝတီဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ဦးခင်ညွန့်၊ ဦးခင်ရွှေတို့ ယခင်က ဆက်စပ်မှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။မကြာသေးမီက အကျယ်ချုပ်မှ ဦးခင်ညွန့် လွတ်မြောက်စဉ် ပထမဦးဆုံး သွားရောက်တွေ့ဆုံသူများထဲတွင် ဦးခင်ရွှေက ထိပ်ဆုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ကို...
More visitors to Burma – မြန်မာပြည်သို့ လည်ပတ်သည့်ပြည်ပဧည့်သည်ဦးရေ များပြား၊ ပိတ်ဆို့မှုဖွင့်ပေးရေး ဖိအားသဖွယ်ဖြစ်
မြန်မာပြည်သို့ လည်ပတ်သည့်ပြည်ပဧည့်သည်ဦးရေ များပြား၊ ပိတ်ဆို့မှုဖွင့်ပေးရေး ဖိအားသဖွယ်ဖြစ် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီလဆန်းမှစတင်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် ပြည်ပဧည့်သည်ဦးရေ များစွာတိုးတက်လာသည်ဟု မြန်မာပြည်သို့ လေ့လာရေးထွက်ခဲ့သည့် NPR...
ကချင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် ၈၈ မျိုးဆက်က ဆန္ဒရှိ by Yangon Press International on Tuesday, 28 February 2012 at 00:13 · မြစ်ကြီးနား၊...
Cartoon Nay Myo Aye – အနိုင်လိုချင် အရှုံးပေး၊ နှလုံးအေးတဲ့ဆေး
ကာတွန်းနေမျိုးအေး – အနိုင်လိုချင် အရှုံးပေး၊ နှလုံးအေးတဲ့ဆေး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
ဂျုံး … ဂျုံး … ဂျက် … ရွှီး … ဒီမိုကရေစီခရီး
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂
မောင်စွမ်းရည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ အညာကျေးလက် ကုန်းတက်ကုန်းဆင်း၊ ကုန်းကျင်းထဲမှာ ဆူးခက်ကာတဲ့ ရွာကလေး။ ရွာကလေးမှာ ရွာပြင်ရွာတွင်း သူငယ်ချင်းလို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် သစ်ပင်ကြီးငယ်၊ ဖက်တွယ်ဆင်းတက် ကိုင်းခက်နိမ့်မြင့် အဆင့်အဆင့်မှာ ပွင့်ပုံသီးပုံ၊ ပျားအုံ...
Workers’ Strike – ၀ါဏိဇ္ဖတရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ် တရားမျှတရန်မသေချာဟု ဦးဖိုးဖြူဆို
၀ါဏိဇ္ဖတရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ် တရားမျှတရန်မသေချာဟု ဦးဖိုးဖြူဆို by Yangon Press International on Monday, 27 February 2012 at 08:53 · ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂...
ကွန်စစ်ကောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ လာခဲ့ … အစ်ကိုလဲ လာခဲ့ ညီလေးလဲ လာခဲ့ အစ်မလဲ လာခဲ့ ညီမလေးလဲ လာခဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ လာခဲ့ မိတ်ဆွေတွေလဲ လာခဲ့ အားလုံးကို...
ပြောင်းတာတွေက ပြောင်းပေမယ့် … ဟောင်းတာတွေက ဟောင်းဆဲကွယ့် …
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံအတနီးက တန်ဖဲရွာမှာ မြစ်ဆုံကျေးဇူး ပဲ့တင်သံ မိတ်ဆုံစားပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ မနက် ၁၁...
အရှင်ပညာနန္ဒနှင့် မော်ရာစတီဖင် စီစဉ်သော စာတမ်းဖတ်ပွဲ အီသကာမှာ ကျင်းပ မိုးမခအထောက်တော် (ယူတီကာ)။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ (သံတိုင်နောက်က မှတ်တမ်းများ) သို့မဟုတ် အကျဉ်းတိုက်ထဲက ဘ၀မှတ်စုများ အမည်ရှိ စာတမ်းဖတ်ပွဲကို အရှင်ပညာနန္ဒနှင့်...
တာရာဝေယံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကို စည်းရုံးရေးခရီးလှည့်လည်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မနောကွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် မနက် ၉ နာရီမှ ၁၀...
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ရသအလင်းမိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ ရသအလင်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသော အလှတရားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အလှူသတင်း လေး ကို သာဓု ခေါ်မုဒိတာပွားနိုင်စေဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ၂၁.၁.၂၀၁၂နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ...
Cartoon Nay Myo Aye – ကြံ့ဖွတ်၏ အရေးသုံးပါး
ကာတွန်းနေမျိူးအေး – ကြံ့ဖွတ်၏ အရေးသုံးပါး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂
အာဇာနည် ဗိမာန်ကို နှစ် ၂၀ ကျော် ပစ်ထား၊ ဇေကမ္ဘာက တရားစွဲမလား၊ ဂျပန်ခရီးသည် ပါးရိုက်မှု – journal news pieces
ညွန့်ထွေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ Myanmar Post ဂျာနယ် – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အယ်ဒီတာချုပ် ရန်ကုန်ရောက်ရှိ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၂ / Yangon Press International ယခင်ပြည်ပရောက် စင်ပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ...
ဖိုးထက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အခုတစ်လော ကျနော့်စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်နေသည်ဟုပြောလျှင် ရူးတော့မှာပေါ့ဟု ထင်စရာရှိသည်။ ကျနော်ဆိုလိုချင်သော သဘော က စိတ်အချဉ်တွေပေါက်နေမိချင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ အရာရာမှာ စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာတွေ မနည်းမနော ရှိမည်ထင်သည်။...
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ အာဏာရှင်တွေ အာဏာမမက်တော့ဘူး ယုံမလားတော့မသိဘူး၊ ယုံတမ်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ကျဗန်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး အောင်မှတ်ရမဲ့ စာစီစာကုံးရေးနေတာမဟုတ်ဘူး ပြည်ပက ဟိုဘက်မလိုက် ဒီဘက်မလိုက် မြန်မာသတင်းဌာနက သတင်းကြေညာတာမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူမှနားမထောင်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက...
Suu at Thone Gwa – သုံးခွမြို့ လူထုဟောပြောပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်အချို့
သုံးခွမြို့ လူထုဟောပြောပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်အချို့ Yangon Press International။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ (YPI) ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက သုံးခွမြို့သို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်ခဲ့ရာ ညနေ ၅...